Daryeelka asaasiga ahi waa oo ka baxsan isbitaalada, sida rugta caafimaadka. Waxaana daryeelka asaasiga ah ka mid ah rugaha daryeelka caafimaadka, rugaha daryeelka hooyooyinka, MVC rugaha daryeelka carruurta, BVC rugaha jimcsiga bukaanka, rugaha dhaqancelinta jirka buka ama dhaawacmay, aqoonyahanka cilmi-nafsiga, aqoonyahanka cudurrada maskaxda iyo qaabbilaadda dhallinyarada.
Marka aad dalka ku cusub tahayna waxaa rugta caafimaadka ku mareeysaa baaritaanka-caafimaadka. Baaritaankacaafimaadka waxaa lagu la yeelanayaa wareysi aad uga jawaabeyso su’aalo ku saabsan caafimaadkaaga. Shaqaalaha caafimaadku waxay kaa qaadayaan baaritaanno kala duwan oo loo diro shaybaarka.
Dakhtarada daaweynta guud waxay arkayaan haddii aad u baahan dakhtar takhusas ah, sida dhakhtarka indhaha ama dhakhtarka wadnaha. Waxuuna markaas dhakhtarka daaweeynta guud u diraa waraaqad (remiss) gaarah xarun qaabilaad oo takhtarada kale takhasusa leh.
Haddiise ilmo aad kaaga xanuunsado ama dhaawacmo, waxaad geyneysaa qaabbilaadda gargaarka degdegga ah ee carruurta oo ku taal isbitaalka. Gargaarka degdegga ah ee carruurta waxaa lagu qaabbilaa carruurta da’doodu u dhexeyso 0 ilaa 16 sano.
Xarumaha qaabbilaadda dhallinyarada waxaa loogu talagalay gabdhaha iyo wiilasha qaba su’aalo ku saabsan isu-galmoodka, caafimaadka iyo xiriirada dadka. Xarumaha qaabbilaadda dhallinyaradu waxay u furan yihiin dhallinyarada da’doodu u dhexeyso 13 ilaa 25 sano. Xadka da'da waa kukala duwanyihiin degmooyinka. Qaabbilaadduna waa lacag la’aan. Waxaa xarumaha qaabbilaadda dhallinyarada jooga ummulisooyin, lataliyayaal, aqoonyahanno cilmi-nafsi, kalkaaliyayaal hoose, dhakhtarro dumarka iyo dhakhtaro caadi ah.
Booqashada qaabbiladda dhallinyarada inta badana waa lacag la'aan laakin marmarka qaarkood waxaa lagu bixiyo lacag uu dhigmato kharashka booqshada rugta caafimaadka. Shaqaalaha joogo qaabbiladda dhallinyarada waxaa saaran waajibka sir-qarinta.
Masawirqaade: Klara Stenström
Daaweynta - Marka uu dakhtarku go’aamiyo in aad u baahan tahay hab daaweyn, sida qalliin, waa in aadan ubahhan in aad sugto mudo ka badan 90 maalmood.
Xadka sare ee kharashka daryeelka micnaheedu waa in qofka bukaanka ah daryeelka ku bixyo 1 100 oo karoon lee sannadkiiba. Marka aad bixiso 1 100 oo karoon, waxaad sannadka inta ka dhiman daryeelka caafimaadku ku heleysaa lacag la’aan. Waxaana lagu siinayaa kaarka bilaashka. Kaarka bilaashkana waxaad shaqeeynaa laba iyo toban bilood, laga bilaabaa maalintii aad sameysey booqashadii ugu horreysey.
Xadka sare ee kharashka daawooyinka micnaheedu waa in qofka daawooyinka ku bixiyo 2 200 oo karoon karoon lee sannadkiiba. Marka aad bixiso 2 200 karoon, waxaad sannadka inta ka dhiman daawooyinka ku heleysaa lacag la’aan. Waxaad ka soo xisaabineysaa maalintii aad iibsatay daawadii ugu horreysey.
Haddii aad qabto cudur noocaas ah, dhammaan baaritaanada, daryeelka iyo daawooyinkuba waa lacag la’aan. Waxaa kaloo lagaa caawinaa in aad la xiriirto dadkii aad cudurka in aad qaadsiisay laga yaabo.
Hey'adda caafimaadka dadweeynaha waa hey'ad ka warbixisa sharciga difaaca cudurrada faafa iyo cudurrada. Bogga internetka www.folkhalsomyndigheten.se ayaad ka akhrisan kartaa in dheeraad oo ku saabsan sharciga difaaca cudurrada faafa.